Madaxweyne Xasan Sheekh oo waraysi dhinacyo badan siiyay AFP
Home Editors picks Madaxweyne Xasan Sheekh oo waraysi dhinacyo badan siiyay AFP
Madaxweyne Xasan Sheekh oo la hadlay AFP
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waraysi dhinacyo badan ka hadlaya wuxuu siiyay wakaalada wararka dalka Faransiiska ee loo soo gaabiyo AFP.
Wuu quraacanaayay waxa uu cunaayay qudaar iyo hilib ari, waxa uu madaxweynaha dhageesanaayay warbixino uu u waday lataliyihiisa si loo dhiso dalkiisa oo sannado badan ku jiray dagaallo.
Lix sanno ayuu hadda xilka hayaa Xasan Sheekh Maxamuud oo horrey u ahaa professor iyo siyaasi cusub, kaddib markii ay doorteen baarlamaanka cusub.
Wariyaha qoray warbixintan wuxuu lee yahay waxaan wareestay madaxweynaha xilli subax ah, waxaa uu isku diyaarinaayay siddii uu qaabili lahaa shan safiir oo ka socda midowga Yurub kuwaasoo kuwaasoo raba in ay noqdaan safiirada waddamadooda u fadhiya Soomaaliya.
Waxaa u shaqayn waayay mid ka mid ah Makarafoonada dhaggaha, waxaa uu yiri “Haddii uu qalab kuu shaqayn waa in aad si dhaqsi ah u sameesaa dib u habayn,”.
Lataliyihiisa waxaa uu hadda in dhaha ku haya Computerka Laptobkiisa, waxaana uu fadhiyaa qolka qadada ee Villa Somalia, dhismahan waxaa dhisay dowladda Talyaaniga oo koonfurta gumeesanaysay.
Maaliki Cabdalla waa nin da’yer wuxuu madaxweynaha tusaayay qoraal ka soo baxay Al-Shabaab kaasoo ah in iyaga iyo sarkaalka Al Amriki or oo Maraykan ah isla markaana ka yimid Alabama uu kala fogaaday.
Madaxweyne Xasan Bidix iyo la taliyihiisa gaar ah waxana ay joogaan xarunta Villa Somalia February 26, 2013 (AFP/File, Abdurashid Abdulle Abikar)
Seddax sanno ka hor, kooxda xiriir la leh Al-Qaeda- ee Al-Shabaab waxa ay gacanta ku heysay dhul badan oo ku yaalla magaalada Muqdisho,waxa ay soo weerrari jirtay xarunta Villa Somalia oo dhowr KM u soo jirsaday.
Laakin wixii xilligaas ka dambeeyay dhul badan ayaa laga qabsaday Al-Shabaab oo ay ku jirto caasimada, waxaana cudud ciidan u sheegtay 17,000-oo askar ka socda midowga Africa .
Al-Shabaab waxa ay isku dayeen in ay khaarijiyaan madaxweynaha markii ay weerrar ku qaadeen hotel uu joogay labo maalin markii la doortay laakin waa uu ka badbaaday weerrarkaas .
Madaxweyne Xasan,waa 57-jir waxa uu horrey uga soo shaqeeyay ururada bulshadda gaar ahaan kuwa waxbarashada, waxaa uu si saani ah ugu hadlaa luuqada Ingiriiska waxaa golaha ammaanka QM ka codsaday in laga caawiyo dib u dhiska dalka .
Tan iyo markii la doortay madaxweyne Xasan waxa uu waqtigiisa ugu badan ku qaataa Villa Somalia — halkaasoo dhowr qolal ay u joogaan xaasaskiisa,, waxaa uu safar kuu tagay, Addis Ababa, Cairo, London, Brussels iyo Washington.
Sidoo kale waxaa uu booqday magaalooyinka Beledweyn iyo Baaydhabo.
Ammaankiisa aad ayaa loo wardiyeeyaa, waxa marka uu la socdo diplomaasiyiin uu xirtaa jaakadaha xabada la isaga celiyo waxaa uu ku socdaa baabuur aan xabad kareynin dhowr ciidan oo qaabilsan ammaanka ayaa wardiyeeyay oo ay ku jiraan AMISOM iyo caddaan
Waxaa Turjumay Bahda Shabakadda Midnimo